Uxolo. Ziziphi izizathu zokuhlawulisa abafazi isambatho sentloko \_ - Rabbi Michael Avraham
Uxolo. Ziziphi izizathu zokuhlawulisa i-headdress yabasetyhini \_
Iimpendulo > Udidi: Halacha > Uxolo. Ziziphi izizathu zokuhlawulisa i-headdress yabasetyhini \_
Sirayeli Ubuzwe kwiminyaka emi-4 eyadlulayo
Uxolo. Ecaleni lengxoxo malunga nokugubungela kakuhle kweenwele zentloko yowesifazane, jonga imfuno ye-1, ndabona ukuba uAmos Bracha wapapasha ukuba kwileta yakho kuye wabhala "ukuba imvume ngokwayo inendawo" (kodwa ayikho kwaphela. kwizizathu zikaRabhi uMashash). Kwaye amaJapan kwinqaku lakho elingasentla.
Emva kokuphonononga, mhlawumbi unokundiqonda apho kwinqaku lakho apho, okanye kuzo zonke, ubhale izizathu?
Ngeleta yakho bona google.com/view/minagshelkishot Uphononongo
Kwaye siyavuyisana nencwadi yakho.
Iithegi zombuzo: Isinxibo sentloko
Andizange ndibhale iingxoxo kuba yayingengomxholo wengxoxo lowo. Eli nqaku lalithetha ngeengxoxo zikaRabhi Mashash.
uYuda h Vula Ngaba i-Iran ilapha? Kwinkqubela-phambili kunye neLiberalism ephilileyo (uKholamu 483)